Baarlamanka Puntland oo ku goodiyay in ay tallaabo ka qaadayaan hay’adaha dowladda ee aan la shaqayn guddiyada – Kalfadhi
April 2, 2019 April 2, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed ayaa kula dardaarmay guddiyada kala duwan ee golaha in ay masuuliyad iyo xilkasnimo dheeraad ah muujiyaan.
Golaha wakiillada Puntland ayaa leh toban guddi oo ka kooban (6 – 7) Xubnood. Gudoomiyayaasha guddiyadaas ayaa ka mid ah guddiga joogtada ah ee golaha oo isna dhan 13 xubnood.
“Waxaan rabaa guddiyadu in ay si toos ah u shaqeeyaan, arrintaa waan ku celcelinayaa” ayuu yiri Dhoobo-daareed. Wuxuu sheegay in arrintaas is bedel ku iman doono.
Gudoomiye Dhoobo-daareed ayaa u jeediyay guddiyada in ay soo gudbiyaan hay’adaha iyo wasaaradaha ay ka suurageli weydo in ay la shaqeeyaan guddiyada, wuxuu sheegay in goluhu la xisaabtami doono isla markaasna talaabo dastuuri ah laga qaadi doono, maadama shaqada guddigu ay tahay mi dastuuri ah.
Wuxuu ka digay in guddiyadu aysan si toos ah u shaqayn, isagoo ugu baaqay in wax ka ogaadaan hawlaha wasaaradaha iyo hay’daha xukuumaddu isla markaasna ay xog ka helaan iyadoo sidoo kale ay muhiim tahay in la arko shaqada ay xildhibaanadu ay shacabkooda u hayaan, waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Guddi walba waxaa laga rabaa wasaaradaha iyo hay’adaha ay la shaqeeyaan culays in ay ku saaraan dhaqdhaqaaq walba oo ay qabanayaan in la socdaan, hadii kale guddigaa gabay shaqadoodii” ayuu yiri Dhoobo-daareed.
Guddiyada jira ayaa leh hawlo shaqo oo u badan korjoogtaynta iyo isla xisaabtanka hay’adaha kala duwan ee dowladda Puntland. Gudoomiyaha ayaa arrintan si qoto-dheer ugu faaleeyay hadalkii xiritaanka kalfadhiga 43aad ee golaha ee Axaddii.